Isakhiwo se-battery yisona esadala ukusha kwamafoni akaSamsung | isiZulu
Isakhiwo se-battery yisona esadala ukusha kwamafoni akaSamsung
Seoul – Uphenyo olwenziwe yisikhondlakhondla senkampani yezobuchwepheshe, uSamsung, seludalule ukuthi imbangela yezigameko zokusha kwala mafoni kwaba yindlela okwakheke ngayo ama-battery ayo nokwakuholela ekutheni ashise ngokweqile bese eyaqhuma.
Kodwa-ke le nkampani ifunge yagomela ukuthi lesi sigameko angeke siphinde senzeke.
OLUNYE UDABA: U-Samsung usumise ukwakhiwa kwefoni egqamuka umlilo – umbiko
Izigemegeme zokusha kwala maselula adle ngobuchwepheshe obusezingeni eliphezulu zaphathisa ngekhanda izikhulu zale nkampani yaseSouth Korea ngonyaka ka-2016.
Imibiko yabantu abathola ukulimala ezigamekweni zokuqhuma kweNote 7 zasabalala ku-internet nokwaholela ekutheni ezinye izinkampani zezindiza zivale amaNote 7 emabhanoyini azo kanti ezinye izinkampani zasezivale bonke ubuchwepheshe bakwaSamsung.
USamsung wagcina ucele ukuba lubuyiselwe emuva lolu hlobo lwamafoni kanti kuqagulwa ukuthi lokhu kwadla le nkampani imali engu-$6 bn.
Umhlaziyi we-HMC Investment Securities, uGreg Roh, uthi ngenxa yokuthi yi-battery kuphela eyaba yimbangela yokusha kwamafoni, hhayi ifoni uqobo lwayo noma ubuchwepheshe obusetshenziswa kuyona, lokho kusho ukuthi alukho ungabazane oluzoba khona ngoSamsung kanye namanye amafoni asezingeni eliphezulu akhiqizwa yile nkampani.